Shahaadooyinka Ugu Muhiimsan ee Xirfadaha Sanadlayaasha ah ITS
Fikrad ahaan, xayeysiisku weligood ma dhicin. Xoogaa, taasi ma ahan mid macquul ah, gaar ahaan degaanka shabakadda. Si kastaba ha noqotee, markaad ku dhejisid dhirbaaxeynta mishiinka guud, waxaad ku jirtaa lakab ammaan ah! Wicitaanku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso qaab, qaab shaqo, qalab, iyo in ka badan si aad u tijaabisid wax badan oo aan ganacsi lahayn qaab dhismeed hadda ama iibsasho qalab cusub oo aan ka shaqeyn karin culeyska dheer.
Awoodda lagu doonayo in la isku dayo waxyaabo cusub ma aha oo kaliya in la hubiyo qummanaanta qaab-dhismeedkaaga xaadirka ah isla markaana kordhiso aqoontaada sida urur. Waxaan sii wadi karnaa wakhti wakhti dheer ah oo ku saabsan sida loo dhisaayo qaab-dhismeedka aan caadiga ahayn, haddana waxaan ka tagi doonnaa VMware.
Waqtiga Lagu Helo Shahaadada Xirfadle Wacan
Shahaadooyinka waa shey asaasi ah oo ka mid ah xirfadlaha xiddigaha ee IT-ga. Waxay kaa caawini doonaan inaad ka bilowdo nuts iyo bolts oo aad naftaada u sii farsamayso, gaar ahaan horumarka hadda socdaalka. Meel walba oo aad soo noqotid, waxaa loo adeegsadaa in la adeegsado sanadka IT-da, samaynta shahaadooyin la xidhiidha si wanaagsan loo yaqaan.
Shahaadooyinka aad u baahan tahay inaad ku guuleysatid kala duwanaansho dhexdhexaad ah ee heer dhexe iyo karti-xirfadeedka.
Ma jiraan tiro qaali ah oo kaararka aqoonsiga ah, hase yeeshee taasi waxay noqon kartaa xayeysiin. Qiyaaso badan oo qarsoodi ah oo ku saabsan shahaadooyinka ayaa ka lumaya markaad haysato goob yar oo kala duwan. U ogolow waxyaabaha aad dhab ahaantii isticmaasho (ama aad u baahan tahay inaad isticmaasho) si toos ah u xulashada shahaadooyinkaaga iyo baahidaada. Halkan waa qayb ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu daba galo ee caalamka quruxda badan leh.
Sida iska cad, horjoogaha warshadaha ee waraaqaha dhijitaalka ah waa VMware. Waxaa jira qaybo shahaadooyin ah oo ay bixiyaan asxaabteena VMware, hase yeeshee doorashadayada ugu sarreeya (faa iido ku filan) ayaa ah doorashooyinka ugu caansan.
Marka laga hadlo fursadda aad u leedahay inaad ka shaqeysiiso sida aad uheli kartid shahaadada heerka VCP, ka bilow aasaaska vSphere 6. Tani waa shahaadada ugu dambeysa ee VMware iyo xaqiiqda xaqiiqda ah iyadoon loo eegin wakhtigaaga si aad u kordho si ay ula socdaan xajinta iyo barashada shuruudda VCP cad.
Xarunta Macluumaadka Sanadka (VCP6-DCV) shahaadeynta ayaa heleysa dhibcooyinka ugu fiican ee ku siinaya macluumaadka ay tahay inaad diirada saarto hawsha.
Sidoo kale, waxaan leenahay indhahayaga ku saabsan qalabka loo yaqaan 'XMUMX adaptation' ee VMware oo ku cusub goobta. VMware ma bixineyso v7 Xarunta Xogta La-xisaabtanka hadda, si kastaba ha ahaatee waxaan rajeyneynaa inaan aragno isla markaa.
Cisco Networking Network Cisco waxay bixisaa kala duwanaansho shahaadooyin kuwaas oo ku dhex jira oo ay ku kasbadaan waxqabad iyo macluumaad.
* Fadlan ka fiirso in Cisco ay hadda tahay wax ka beddelaysa tiro badan oo ka mid ah imtixaanaadka xogta diiradda, kuwaas oo qaar ka mid ah ay iska casili doonaan July 3, 2017.
Xarunta Xogta Isku-xirka ee Cisco (CCNA) Xarunta Macluumaadka (Citizen Network Certified Networking Center) waa goob-qaadashada meelaynta dhabta ah ee Cisco. Caddayntaasi waxay kuu dejinaysaa shahaadooyinka takhasuska ah iyo shahaadada heerka xirfadeed, markaa ka feker sida marxaladda bilawga ah ee sanka la yiraahdo Cisco.
Shahaadada Takhasuska Iskudhafka ah ee Cisco wuxuu daboolayaa asaasiga Nidaamka Isku-dubbaridka ee Cisco iyo tijaabinta kartidaada si aad u qabato xaalad Xarunta Xogta Dhaqaalaha ah. Shahaadadani waxay ku socotaa habka dodo dhow. Waxaa la iscasili doonaa July 4, 2017, sidaa daraadeed haddii aad u baahan tahay inaad hesho shahaadadan! Fursada aanad ku cadaadin karin tan ka hor intaanay is casilin, CCNP Xarunta Macluumaadka Xarunta ayaa ah bedelka beddelaadda.
Shahaadada Aqoonsiga Xarunta Xirfadleyda ee Cisco Certified Network (CCNP) waxay ka kooban tahay afar imtixaan oo waa naxdin. Waxaa jira xulasho imtixaan oo kuu oggolaanaya in aad soo qaadato habka ugu sarreysa ee caddayntaada, shahaado gaar ah.
Habka Microsoft ee loola shaqeeyo dheelitirnaanta waxay ku xiran tahay habdhismeedka qaab-dhismeed ee laga yaabo inaad joojiso kormeerida shabakadaha, xakamaynta server-yada, ama si kasta ha ahaatee qaababka barnaamijka. Waxaa jira laba ama sadex shahaadadood oo kaa caawin doona inaad isku xirto nidaamka sysadmin iyo kartidaada.
Iskaashiga Soogalootiga Sare ee Microsoft (MCSA): Shahaadada Windows Server 2012 (ama Shirkadda Windows Server 2016) waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu caansan ee Microsoft oo loogu talagalay IT-da oo aad ku ogaaneysid adegyada Windows Server. Caddaynkan wuxuu ka kooban yahay saddex imtixaan, kuwaas oo dhammaantood ay leeyihiin imtixaan u ah imtixaanka. Si kastaba ha noqotee, beedka sonkorta ee ka caawin kara dawadan ayaa hoos u dhacaya waa in MCSA ay muhiim u tahay shahaadada heerka khibrada leh.
Khabiirka Sayniska Sare ee Microsoft (MCSE): Xayeysiinta Barxadda iyo Shirkadda Infrastructure waxay wax ka qabataa labo ama saddex waji cusub ee casriyeynta Microsoft: Sanure iyo Virtualization Server Windows. Marka la eego qaabka shahaadada cusub ee Microsoft, waxaad haysataa fursad aad ku qaadato imtixaannada xulasho ballaaran, oo ku siinaya fursad aad ku bedesho shahaadadaada. Waxaad ku iibineysaa MCSE adoo maraya hal imtixaan, laakiin markaa waa inaad qaadataa imtixaan joogto ah si aad u haysato shahaadadaada joogtada ah iyo kan sharciga ah.
Waxyaabaha Citrix waxay caan ku yihiin ganacsiga IT-ga, iyo fursadda aad ku joojinayso inaad la shaqeyso waxyaabahaas, shahaadada Citrix waxay noqon doontaa mid aad u muhiim ah. Citrix waa ciyaaryahan muddo dheer ah oo ku yaal goobtii dhirbaaxada iyo wuxuu bixiyaa seddex shahaadooyin oo lagaa rabo inaad diirada saarto horumarkaaga khibraddaada:
Ururka Citrix Certified Association - Dhisidda (CCA-V)
Citrix Certified Professional - Dhaqangelinta (CCP-V)
Citrix Certified Expert - Farsamada (CCE-V)
Mid kasta oo ka mid ah calaamadahaasi waxay xoogga saaraan sheyga hogaanka Citrix, XenDesktop, oo kugu soo wareejinaya iyada oo loo marayo nidaam heer sare ah oo awood u leh iyo macluumaad item.
SYLARmins Linux, wada jir! Red Hat waxay bixisaa shahaadooyin ah shahaadooyinka sinjiyada ah kuwaas oo si khaas ah faa'iido u leh siyaasadaha khaaska ah ee aan lagu xakameynin iibka ballaaran. Red Hat waxay bixisaa kala duwanaansho weyn oo ah shahaadooyin, tiro aad u tiro badan oo ka mid ah dhageeysiga, hase yeeshee hal kantarool ayaa soo baxaya sida daruuriga ah ee loo baahan yahay si xirfad-xirfadeedka loo adeegsado.
The Maamulaha La-talinta ee Red Hat Certified (RHCVA) shahaadadu waxay u direysaa xirfadlaha dhijitaalka ah ee Linux, waxayna xaqiijinaysaa aragtidaada iyo kartidaada aad u dirto iyo kormeerida saldhigga aasaasiga ah, martida, iyo martida isticmaalka Red Hat Virtualization. The RHCVA Sidoo kale waxay kuu dejineysaa inaad raadsato shahaadada aqoonyahanka-iyo Qiimeynta heerka maadada.
Waa lagama maarmaan in marnaba toos ugu toosin habka loo damaanad qaado. Qaado kursi, baaro waxa la heli karo, oo ogow waxa ugu wanaagsan ee ku habboon baahiyahaaga. Qaar ka mid ah shahaadooyinka ayaa ka yimid heerarka isbedelka, waxay u baahan yihiin habsocod wanaagsan oo lagu amrayo in maskaxda lagu hayo ujeedada ugu dambeysa si kor loogu qaado tallaabada. Sameynta qorshe hore ayaa kaa qaadi kara waqti iyo waayitaankiina, waxaanan xitaa bixinnay dariiq shahaadayn oo habboon si loo helo xirfad u adeegsanaysa dariiqa iyo sanqadhiyeynta ka hor.
Waxyaabaha ay yihiin waxa ay yihiin, miyaad sheegi kartaa inaad sii wadi doonto?
Maxaad u tiirsan tihiin: Soodhad awoodi kara hal shaqo oo shaqo? Ama, dhinaca kale server-yada ka shaqeeya Hypervisor oo sameeya mashiinno farsamo oo tiro badan, oo sii wadi kara isbedelka qaabdhismeedka shaqada ee dhammaantood si qotodheer loogu habaysan karo iyada oo aan ku dhowayn kharash dheeraad ah? Doorashada labaad waxay noqon doontaa midka ugu wanaagsan ee wax ku oolka ah ee urur kasta. Tababar kasta ayaa ku farxi lahaa inuu ka faa'iidaysto iswaafajinta iyo kharashka ku filnaansho ee ku habboonaanta jiilkaaga.
Shahaadooyinka shahaadooyinka ee VMware, Cisco, Microsoft, Citrix iyo Red Hat ayaa ku tusaya sida loo jaangoynayo jiilkaaga ku hareeraysan. VMware ilaa goor dambe ayaa hoos u dhacay labo shahaadadood oo cusub oo ku saabsan nidaamka Xaqiijinta Shahaadada VMware Certified 7, VMware Certified Professional 7 - Maareynta Daruuriga iyo Gawaarida (VCP7-CMA) iyo VMware Certified Professional 7 - Miisaanka iyo Mobility (VCP7-DTM) si ay kaaga caawiyaan inaad kudarto waxyaabaha ay ku cusub yihiin.
Qaadista shahaadaynta ee raadinta ka dib waxay noqon kartaa mid dhib badan, si kastaba ha noqoto nidaam caddaynaya shahaadooyinka ay ku faa'iideysan doonaan adiga iyo xirfadkiina waxay kaa caawin doonaan inaad jahawareeriso jidka kaas oo gebi ahaanba kuugu faa'iideysan doona sidii aad uhesho. Mid ka mid ah farsamada waa in laga bilaabo waxyaabaha aad u isticmaasho shaqada. U sheeg waxyaabaha aad xaq u leedahay hadda ka faa'iideysiga meesha aad ka bilaabeyso, ka dibna u daa dulsaar gaar ah oo aad uga foojignaatid horumarka farshaxanimada ayaa go'aan ka gaaraya xigaada xigta.
Maaddaama dheelitirnaanta iyo diiwaangelinta daruurtu waxay sii socotaa horumarinta oo u soo baxaan si aad u sii kordhaya si aad u sii dhexgalo xaaladaada, aragtidaada fikradda ah ee ku saabsan sanadkaaga maaha kaliya inaad ka dhigto mid muhiim u ah ururkaada marka lagu daro marin-u-furista jidadka xirfad-yaqaannada maskaxeed marnaba marnaba ka fikirin.
Wax-ku-oolnimada ayaa sii wadi doonta sii koritaanka adiga ama adiga la'aanteed, maxaad u noqon laheyd mid ka mid ah?